शुँभ दीपावली २०६६ देउसी भैलो कार्यक्रम, मिनिसोटा
By Bishow Paudel October 21, 2009
शुँभ दीपावली २०६६ को शुभ अवसरमा मिनिसोटा बासी नेपालीहरुले देउसी भैलो कार्यक्रम गरेर उत्साहजनक तवरले मनाएका छन् । संजेल परिवार को संयोजनमा भएको उक्त कार्यक्रममा मा गीत सङ्गीत साथ साथै रमाइला रमाइला देउसी गीत हरू गाइएका थिए । केटा केटीहरुको पनि उत्साहजनक सहभागिता थियो । कतिपय नेपाली मुलका यी केटा केटीहरूको लागी यो नै पहिले देउसी भैलो कार्यक्रम थियो ।
बिदेशीएका नेपाली परिवार हरुले पनि आफ्नो रीतिरिवाज तथा चालचलन लाई पूर्व रुपमै अगालेको भान भएको थियो । प्राय सबै जसो परिवारहरूले ले सेल रोटी, अनरसा, अर्सा, पुरि, खीर तथा विभिन्न फलफूल हरुले देउसीभैलो टोली लाई स्वागत गरेका थिए ।
पङ्क्तिकार पनि प्रस्तुत कार्यक्रममा संलग्न थियो । उक्त कार्यक्रम का केही तस्विर यहाँ पेस गरेको छ, तस्विर उपलब्ध गराइदिनु भएको मा संजेल परिवारलाई धन्यवाद !
कार्यक्रम बाट करिब ६०० डलरको हाराहारीमा रकम सङ्कलन भएको थियो। उक्त रकम को सहि ठ सदुपयोग को लागी कार्यक्रम आयोजकहरू भलाकुसारी गर्दै छन् । एउटा निकै रमाइलो प्रस्ताव पनि आएको थियो, केहि देउसी भैलो टोलीका मित्र हरुलाई उक्त ६०० डलर दिएर क्यासिनो पठाउने , अनि उहाँ हरुले डबल गरेर ल्याउने ! यो डबल गर्ने प्रस्तावमा , तपाईको के बिचार छ कुन्नी ?
मनोरञ्जन शुभकामना सुचना-समाचार
Labels: मनोरञ्जन शुभकामना सुचना-समाचार